Ungayiqeqesha Kanjani iGolide Retriever | Izinja Umhlaba
Ungayiqeqesha kanjani i-retriever yegolide
ULurdes Sarmiento | | Ukuziqeqesha
IGolden Retriever ingenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zohlobo lwe-canine laphaya: inothando, inobungane, iyabekezela nezingane, ihlakaniphile ... Kuyinto enoboya noma yimuphi umndeni ozoyithokozela, ngoba ithanda ukufunda izinto ezintsha, uma nje abantu besenza. thatha ngomdlalo 😉.
Uma sifuna ukujabulela impilo ngokugcwele, ayikho into efana nokuba nomlingani omuhle njengaye. Kepha, Uyazi ukuthi ungaqeqesha kanjani i-retriever yegolide?
1 Isu lokuqeqesha ukuze unakekele i-Golden retriever yakho
2 Izinto okufanele wazi ngaphambi kokuqeqesha inja
3 Ungayiqeqesha kanjani iGolden Retriever?
4 Eminye imiyalo yenja esezingeni eliphakeme
5 Ukufundisa imikhuba yenhlanzeko
6 Ukuguqulwa kokuziphatha kwe-retriever
Isu lokuqeqesha ukuze unakekele i-Golden retriever yakho
Sebenzisa igama elithile lapho ugxila ekufundiseni inja yakho okuthile futhi lapho inja yakho ikunaka, hamba uye kuye umuklomelise kanye negama noma ibinzana eliqinisayo njenge "inja enhle, enhle kakhulu noma enhle."
Lapho kudlule imizuzu embalwa, phinda isenzo esifanayo, kepha manje ngomvuzo ozowunikela esandleni sakho nokugcina ibanga elingu-30 cm kusuka esilwaneni sakho. Mkhombise umklomelo ngenkathi usho igama ukuze unakwe futhi kuzoya kuwe nakuwe ngokufanayo. Manje mnike umklomelo wakho ngokulalela.
Okwesithathu ukukwenza, uzohlala kude kakhulu nenja, ngakho-ke kufanele eze kuwe nakanjani futhi uma umnika umklomelo wakhe, khumbula ukumhalalisela ngokulalela kwakhe.
Ngalezi zinyathelo ezilula uzothola ukunakwa kwesilwane sakho futhi manje ungamfundisa amanye amaqhinga, ngoba Bazokwazi ukuthi ngemuva kokulalela kukhona umvuzo abangawuthola kuwe.
Khumbula ukuthi kubalulekile ukuthi ugcine igama elilodwa ukuze bakunake nokuthi lokhu kungaba "ukunakwa" noma "ukulalelisisa", noma elinye igama ozizwa ukhululekile ngalo futhi elingadideki kweminye imiyalo.
Izinto okufanele wazi ngaphambi kokuqeqesha inja
Ukuqeqesha inja, kungakhathalekile uhlobo (noma ukuwela), kubalulekile ukubheka lokhu okulandelayo:
Igama elifanayo kufanele lihlale lisetshenziselwa i-oda ngalinye. Isibonelo, uma sifuna ukuthi ahlale phansi, sizothi "hlala" noma "hlala" isikhathi ngasinye, kodwa ngaso sonke isikhathi kuyafana.
Gwema ukusho igama kuqala bese u-oda. Igama lakhe yigama esizoliphinda kakhulu empilweni yakhe yonke, ngakho-ke kufanele libe nencazelo engathathi hlangothi kuye. Ngakho-ke, esikhundleni sokuthi "Kira, woza", kuzoba ngcono ukuthi "Woza, Kira".
Kufanele uthathe njengomdlalo. Ukufunda kufanele kumjabulise. Ngalesi sizathu, kuyadingeka ukuthi ubekezele kakhulu nenja, futhi uyinikeze imivuzo eminingi njalo lapho yenza okuthile esikufunayo.
Ungamhlukumezi, noma umthethise, noma wenze noma yini engamlimaza. Uma sibe nosuku olubi, ngeke silulolonge, sizodlala ngalo.
Ungayiqeqesha kanjani iGolden Retriever?
Ngokubekezela, ukubekezela kanye nenhlonipho. Izinja akuwona amarobhothi, ngakho-ke zidinga ukuphinda into efanayo izikhathi eziningana ukuze ziyifunde. Amaseshini kufanele abe mafushane, angabi ngaphezu kwemizuzu engu-5-10, ngaphandle kwalokho izobhoreka zisuka, ikakhulukazi uma iwumdlwane.
Eminye imiyalo okufanele uyifunde yile:
I-Ven: Lo ngumyalo olula ozowufunda ngokushesha, impela. Kumele ume amamitha ambalwa ukusuka kuye, bese uthi 'Woza' ngenkathi umkhombisa ukwelashwa ngokwesibonelo.
Hlala noma hlala: Ungaqala ukunikeza iGolden Retriever yakho umuthi njalo lapho ubona ukuthi izohlala phansi, nangokuthi, ngaphambi kokuthi ishaye phansi, "hlala". Ngakho-ke, njengoba uphinda okuningi, kungekudala uzokwazi ukumcela ukuthi ahlale phansi.
Kodwa-ke, uma ukhetha ukumfundisa lo myalo ngenye indlela, phatha umuthi ekhanda lakhe nangemuva komhlane wakhe, futhi ngesandla sakho samahhala faka ingcindezi ethile ngemuva kwakhe. Ngaphambi kokuba ahlale phansi, mtshele ukuthi "hlala."
Noma kunjalo:Ngabe kunzima ukuthi i-retriever yegolide ihlale inganyakazi? Hhayi hhayi kangako. Ngomzuzwana okuyizinyathelo ezimbalwa kusuka kuwe, thatha ithuba uthi "Thula". Yibambe lapho imizuzwana embalwa, bese uthi "Woza." Lapho nje eseceleni kwakho, mnikeze ukwelashwa.
Kancane kancane uzokwazi ukudlulela phambili nangaphezulu.
Hamba eceleni:pUkwenza inja ihambe nawe ungasebenzisa noma imiphi yale miyalo yomyalo: "Fuss, along or side", okukhombisa ukufundiswa okufanele ikuthobele.
Ukulala phansi:sUma ufuna inja ilale phansi noma ihlale ilele endaweni, kuzofanela uthi "phansi, platz noma tumba", futhi khomba lapho kufanele uhlale khona.
Emile: vsisikhukhukazi ufuna inja ivuke lapho ikhona, kufanele ukhombise "unyawo", ukuze ime endaweni yokuma.
Ukuletha:sUma sifuna inja ikhuphuke odongeni noma igxume uthango, umyalo okumele iwuthole uthigxuma, khuphuka noma gxuma".
Adelante:pUkuze inja igijime iye phambili, kufanele nje ukhombise i- "voraus" futhi ngalo myalo izokuqonda.
Ukucinga: nomaOmunye wemiyalo eyisisekelo yokuqeqeshwa uthi “okunjalo noma ukusesha”, Isetshenziselwa izinja ukuqala ukulandelela futhi zithole okuthile.
Yehlisa:sUma inja inokuthile ofuna ukuyidedela, kufanele umtshele ukuthi “namanje, uyeke noma unikeze”, ukuze inja ikwazi ukubuyisa into ethathiwe, kodwa “shiya uyeke” ziphinde zihlotshaniswe nesilwane esiphetha ukuhlasela.
UCalla: vsisikhukhukazi inja ikhonkotha futhi ufuna ithule, kufanele ukhombise umyalothula noma uthulet ”.
Amagxolo:pKepha uma ufuna akhonkothe, umyalo wokumtshela ukuthi "bark."
Cha: vsNjengomyalo wokujezisa inja, i- abaqeqeshi basebenzisa i- "pfui, cha noma embi", ukukhombisa ukuthi ukuziphatha kwakho akulungile.
Kuhle pKepha ukumhalalisela ngokuziphatha okuhle, ungasebenzisa "kahle kakhulu."
Eminye imiyalo yenja esezingeni eliphakeme
Lapho inja yakho isikufundile imiyalo eyisisekelo yokuqeqeshwa kwakho, ungaya ezingeni elilandelayo lokuqeqeshwa nalapho unganikeza khona ama-oda akude ngaphandle kokubopha ibhande.
Kude:pUzokwazi ukukhombisa noma imiphi imiyalo eyisisekelo ngaphandle kokuba seduze kwenja, njenge hlala, woza noma ulale.
Ukucinga: lUngacela inja yakho ukuthi ifune izinto ezithile futhi izilethe kuwe.
Ukwenqaba kokudla:en lokhu phuzu ungafundisa inja yakho ukwenqaba ukudla emgwaqweni lokho kungatholakala ngesikhathi sokuhamba kwakho, ngaleyo ndlela kukuvimbele ukuthi ungaguli.
Ngokuyinhloko ezingeni eliphakeme ekuqeqesheni inja yakho izogxila kuyo qinisa ukuxhumana okukhona phakathi kwakho naye, ngoba yonke imiyalo izokwenziwa ngaphandle kwesidingo sokuba sohlangothini lwakho noma ambambe ngentambo.
Ukufundisa imikhuba yenhlanzeko
Ukubuyiselwa kwegolide kuyizinja ezihlakaniphe kakhulu, ngakho-ke ukufunda okuthile kubo ngeke kube nzima kakhulu. Ukuzifundisa imikhuba yenhlanzeko, njengokuzikhulula, kuzodinga ukuthi ukhethe indawo ethile lapho isilwane sizoyenzela khona, futhi kuzofanela futhi ukhethe ngaphandle kwekhaya lapho kuzoba khona.
Uma isiza singaphakathi kwendlu, okungcono kakhulu ongakwenza ukusiqeqesha ngephephandaba endaweni oyikhethele yona; ngenkathi ingekho ekhaya, izindawo ezinconywe kakhulu kuzo ukhonkolo, umhlaba noma utshani.
Into ephumelela kakhulu ukuze bangenzi ubudlabha endlini yonke, ukuthi yindawo eyodwa lapho uqeqesha khona iGolide yakho, ngoba uma ushintsha, kungenzeka ukuthi umthumelela umyalezo ongafanele futhi kuzofanele ufake ngaphakathi lokho kufundiswa.
Uzodinga isikhala esingasikhulu kangako ukuze inja yakho ikwazi ukuzikhulula ngakolunye uhlangothi, beka umbhede wembuzi ukuze akwazi ukulala ngokuthula.
Ngaphezu kwakho konke, imidlwane yalolu hlobo ivame ukuzikhulula, ngakho-ke uma uyikhipha, kufanele ukwenze okungenani njalo ngehora nesigamu. Njengoba isikhathi sihamba ungakwenza kaningi.
Kubalulekile ukuthi wenze ifayela le- ukuqinisa okuhle nesilwane sakho lapho usifundisa ukuya endlini yangasese, ongayenza ngokuhalalisela nangokuphatha, ukuze uqiniseke ukuthi uyaqonda ukuthi lesisimo sakhe siyakuthokozisa.
Ukuguqulwa kokuziphatha kwe-retriever
Lapho abakwaGolden Retrievers bebonke bengakutholi ukuqeqeshwa okuhle ezinyangeni zabo zokuqala zokuphila, bathambekele ekubeni nokuziphatha okungalungile kulolu hlobo lwezilwane ezifuywayo, ngakho-ke zizodinga ukuthi ziguqulwe.
Futhi yize lona kungumsebenzi akudingeki wenziwe ngochwepheshe. Kodwa-ke, kufanele ucabange ukuthi ukuguqula indlela yokuziphatha kwenja yakho akuyona kuyohlale kwenzeka, ikakhulukazi uma begxilile kuyo.
Ukuziphatha okumele kuguqulwe kuhlobene nokuziphatha kwabo futhi yilokho okungavumeli iGolide noma abanikazi bayo ukuba babe nenkambiso ejwayelekile yansuku zonke.
Ezinye zalezi zinkinga zokuziphatha ezidinga ukuguqulwa yilezi:
Njengoba sibonisile, lezi zimilo zingaguqulwa noma zingashintshwa, ikakhulukazi uma ngabe Ukubuyiselwa kwegolide ube yisisulu sodlame, njengoba kuzoba nzima ngaye ukwethemba abanye abantu ngisho nalo elinye iGolden.
Ulaka lwegolide kungahle kube ngenxa yokwesaba ukwedlula ulaka olunjalo, ngakho-ke kuyadingeka ukwenza ukuxilongwa okulungile kwesizathu sokuziphatha kwayo, into enganqunywa kuphela ngudokotela wezilwane.
Ngokuguqulwa kokuziphatha, inhlalakahle yezilwane yenja kufanele ize kuqala, ngoba kungenjalo, ngeke iphendule kahle emiyalweni oyinikeza yona.
Njengengxenye yokuguqulwa kokuziphatha okunjalo, kuzofanele usebenzise ukuqiniswa okuhle, ngoba leli yithuluzi elihle kakhulu elikuvumela ukuthi uzuze imikhuba emihle yenja futhi ngaleyo ndlela uzokwakha isibopho esihambelana nayo futhi mhlawumbe, ushintshe lokho ebikwenza kabi ngokuziphatha kwayo.
Isibonelo esilula salokhu kungaba inja ehlafuna izicathulo zenkosi yayo. Uma sifuna ukuguqula lo mkhuba kufanele simklomelise laphoEsikhundleni salokho, sebenzisa yena amathoyizi akhe okuhlafuna hhayi izicathulo zakhe.
Ngendlela efanayo ebesingenza ngayo uma ihlangana nezinye izinja, ngoba ngale ndlela izokuqonda ukuthi lokhu kuziphatha kuhle.
Ukufeza lokhu okungenhla, kufanele usebenzise isimo se-classical, uhlobo lokufunda lapho kufanele usebenzise khona ukugqugquzela okungathathi hlangothi okungabonisa impendulo ezenzakalelayo enjeni, ngemuva kokuphinda uvuselele okunesimo kaningana. Uma usuyizuzile, leso sivuseleli manje sesizoba yisikhuthazi esimisiwe.
Ngale ndlela, ungaguqula indlela yokuziphatha kweGolide yakho, ilawula isikhuthazi esitholayo futhi esisetshenziswa kakhulu ekuqeqesheni izinja ukuxazulula izinkinga zekamelo.
Ngakho konke okushiwo kule ndatshana, impela uzokwazi ukuqeqesha kahle i- Ukubuyiselwa kwegolide futhi ujabulele kakhulu ukuba nenkampani yalokhu, futhi nakanjani uzokwenza okwakho. Khumbula ukuthi manje unenja ehlakaniphile kakhulu engeke kube nzima ukunikeza uthando oluningi nokutotosa, kepha futhi kufanele ukhuze uma kunesidingo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Ungayiqeqesha kanjani i-retriever yegolide
Abafundi abangalingani enjeni: kusho ukuthini?
Izizathu zokuthi kungani inja yakho yopha epeni